Rugby – « Terre en mêlées »: maherin’ny 40 mianadahy manaraka fiofanana | NewsMada
Rugby – « Terre en mêlées »: maherin’ny 40 mianadahy manaraka fiofanana
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny fiofanana karakarain’ny fikambanana « Terre en mêlées », eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Mpiofana miisa 40 mahery, avy amin’ny sehatra samihafa no misitraka izany.
Hampihena ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy ny vavy eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny rugby, io no tanjona amin’izao fiofanana izao, izay haharitra herinandro eny amin’ny ANS ( Académie Nationale des Sports) Ampefiloha. Mpiofana avy any faritra sy avy eto Antananarivo no misitraka ny fifampizarana atolotry ny manampahaizana frantsay miisa telo mirahalahy, miaraka amin’ny filoha mpanorina ny fikambanana “Terre en mêlées”. Marihina, voalohany ho an’i Madagasikara izao fampiofanana momba ny rugby “Terre en mêlées” (TEM), omena manampahaizana vahiny, izao. Fifankafantarana teo amin’ny samy mpiofana no nanombohana ny fiofanana, omaly maraina. Nitohy tamin’ny fifampizarana avy amin’ireo manampahaizana sy ny lalao samihafa izany ny hariva.
Anisan’ny tonga nanome voninahitra ny fanokafana ny fampiofanana teny Ampefiloha, ny avy eo anivon’ny MJS izay nahitana ny Sekretera Jeneraly, Ralaivao Lovatiako sy ny Tale Jeneraly ny Spaoro, Rakotozafy Rosa. Nanambara ireto solontenan’ny Minisitera ireto fa tena ilaina amin’ny fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy ity tetikasan’ny fikambanana “Terre en mêlées” ity, izay nisaoran’Andriamatoa Lovatiako, ny avy eo anivon’ny Masoivoho frantsay, ny filoha mpanorina ny TEM, ny Talen’ny ANS ary ireo mpiofana voasafidy hiatrika ity fampiofanana ity.
Marihina, hisy ny jery todika hatao aorian’ny fifampizarana mandritra ny 6 andro, mialohan’ny famaranana amin’ny fomba ofisialy.